Waa maxay sababta aad samayn Lugood gurmad si drive dibadda adag
Waxaa inta badan lagu talinayaa in ay dib u kor maktabadda Lugood si aad u drive dibadda. Ilaalinta nuqul ka mid ah dhammaan faylasha aad iyo aad u raacdid gooni uga your computer waxaa si gaar ah loo baahan yahay in kiiska keenta mashaqada lama filaan ah ku dhaca aad PC.
Howlgalkan waxuu sii, marka laga reebo in aad badbaadinayo Wabiyaal oo ilmo kale oo uu saamaxayaa saacadood iyo saacadaha laga fogaado isku dayay inuu ka soo kabsado music lumay, gaar ahaan haddii aad playlist ka yimaadaa CD-shakhsi ah kuu gaar ah. Noocan ah faylasha loo baahan yahay in dib iyo waxa ay noqon doontaa nixi haddii aad lahayd si ay u dhan mar kale sameeyo ka dib ururinta heeso iyo gabayo muddo sanado ah!
Siyaabo rasmiga ah si Lugood gurmad si drive dibadda adag
Hadda aynu eegno waxyaabaha looga baahan yahay kan qumman dib on drive dibadda.
First of dhan aad u baahan tahay si ay u soo hubiyo in dhammaan waxyaabaha aad rabto in aad dukaanka ayaa dhamaantood la geeyaa hal meel. Iyada oo ku xidhan PC ama Mac, halkan waa tallaabooyinka aad u baahan tahay in la raaco si ay u meel kasta oo faylasha aad hal meel, diyaar u ah in lagu wareejiyo drive ee dibadda:
Tix Open on Lugood
Marka on Mac, dooran Lugood doorbidida; halka on Windows dooran Edit ka dibna aad rabtid.
Riix Advanced iyo ugu dambayntii waa in aad hesho suuqa kala finalka labada kiis. Hubi in 'Copy files si Lugood Media folder markii isagoo intaa ku daray in maktabadda' la doorto. In sidaas la sameeyo, waxaad hubisaa in nuqul ka mid ah files asalka Lugood waa nuqul galka Media dhigi.
Dooro file iyo Maktabadda, dooro Abaabulaan Library.
Dooro ikhtiyaarka 'raaciyo files' oo guji ok
Waxaa la soo jeediyay in ay tirtirto faylasha asalka dib markii uu xaqiijiyay ay la dhaqaaqay oo waxaa la xoojiyaa si ay u badbaadiyaan qaar ka mid ah meel on your disk adag.
Waxaad raaci kartaa tilmaamaha soo bandhigay website-kan: https://support.apple.com/en-us/HT201625
Oo wakhtiguna wuxuu u yimid inuu badbaadsho faylasha aad ku wadid dibadda adag. Diyaar ma u tahay?
Drive A adag waxaa laga iibsan karaa dukaanka kombiyuutar kasta ama Online. Waxay ku siisaa hab lagu badbaadiyo faylasha aad meel sii joogi doono Sucuudiga ay dhacdo in aad computer lahaa keenta mashaqada ama ahaa rajadii jabay.
Si loo sii wado, waxaad u baahan doontaa inuu ka tago Lugood.
Haddii aad ka shaqeeya Mac , raac habkan:
Meel aad drive dibadda adag. Waxaad ka eegi kartaa waxa loogu on desktop ama galeeysid Finder ah.
Markaasuu ku yaalla gal Lugood adigoo sugaya Finder xarig> username > Music meesha username waa dabcan magaca folder.
Haddii aadan awoodin in aad ka heli gal ah in meesha caadiga ah, ka dibna aad kala socon kartaa tallaabooyinka hoose si aad u baartid,
Fur rabtid Lugood.
Meesha aad folder Lugood lagu qori doonaa "Lugood Media gal goobta" sanduuq.
Haddaba intii tallaabo kama dambays ah, waa in aad la jiidayo oo keliya folder Lugood si wadid aad dibadda. Xusuusnow howlgalkan qaato muddo ah, gaar ahaan haddii aad tahay badbaadinta badan oo files. Marka iibsiga dhamaato, dhammaan faylasha aad ayaa si sax ah loo badbaadi doonaa on your drive dibadda adag.
Tallaabooyin la mid ah waxay yeelan doonaan in la raaco haddii aad ka shaqeeya Windows :
Meel aad drive dibadda adag. In daaqadaha, waxaad ka heli doontaa My Computer
Markaas helo folder Lugood adigoo raadinaya xarig saxda ah, taas oo ku xidhan version Windows aad haysato (in Documents iyo Settings for Windows XP ama folder User ee qoraalkii kale).
Jiid gal si wadid aad dibadda!
Sida loo soo celiyo aad Back up Library si aad u computer ka drive dibadda
Hadda oo aad ku guuleeysatay dhabarka ilaa drive dibadda, aad rabto in laga yaabo in ay ogaadaan sida ay u gudbiyaan dhammaan faylasha aad ku computer labaad ama waxaa laga yaabaa dib u gudbin ilaa files si computer la mid ah ka dib markii formatting.
Isticmaal habka soo socda haddii aad ka shaqeeya Mac :
Jooji Lugood iyo aad u hesho drive adag dibadda ah (on Desktop ama galeeysid Finder)
Jiid folder Lugood ee aad gaari ku adag dibadda back to drive adag aad gudaha, in meesha uu ka doorteen. Waxaa si kastaba ha ahaatee talinayaa in la doorto goobta default u folder Lugood ah: Finder> username > Music
Fur Lugood by haysta hoos Key Xulashada
Marka ilaa pop u muuqataa, guji "Dooro Library"
Dooro folder Lugood aad uun dib ugu drive gudaha adag u dhaqaaqay.
Guji "Dooro '
Dooro gudaha file Lugood Library.
Lugood haatan u furan doono iyo Library Lugood ee la soo celin doonaa.
Haddii kale, raac habkan haddii aad ka shaqeeya Windows :
Jooji Lugood iyo aad u hesho drive dibadda adag (ee My Computer)
Jiid folder Lugood ee aad gaari ku adag dibadda back to drive adag aad gudaha, in meesha uu ka doorteen. Waxaa si kastaba ha ahaatee talinayaa in la doorto goobta default u folder Lugood ah:
Hadda hoos u hay Key Shift oo fur Lugood.
Wuxuu furaa folder Lugood aad uun dib ugu drive gudaha adag u dhaqaaqay.
Dooro gudaha file ka Library.
Kaabta faylasha music Lugood in drive dibadda adag
Xusuusnow in gurmad Lugood files music gurmad liiska music Lugood gurmad oo kaliya laakiin aan, sidaas darteed si ay u files music Lugood gurmad u drive dibadda u adag, waxaad heli kartaa in ay isticmaalaan barnaamij sida TunesGo Wondershare .
Sidee baad u dhaqmaysaa in? Waxaad u baahan tahay oo kaliya in la raaco tutorial fudud:
Ku rakib oo aan bilowno barnaamij marka aad ka soo dejisan ka link ee kor ku xusan.
Bareesada aad drive dibadda adag tahay in aad computer.
In TuneGo, dooro faylasha aad rabto in lagu wareejiyo oo guji saddexagalka hoos dhoofinta in
Dooro "Dhoofinta in My Computer" ka dhoofinta in ay hoos-hoos liiska. Raadi drive dibadda adag aad ku xirnayn your computer iyo badbaadin files kuwaas oo ku yaal.
In uu furmo suuqa cusub, ka heli wadid aad dibadda iyo badbaadin aad songs!
> Resource > Lugood > Sida loo dib Lugood Library aad dibadda Drive